Zimbabwe commemorates independence day
Malawians joined the Zimbabwean community living in the country in commemorating Zimbabwe’s National Day on Saturday marking the 35 anniversary of independence from British colonial rule.
Zimbabwean Ambassador Tandiwe Dumbutchena
Zimbabwean Ambassador to Malawi Tandiwe Dumbutchena said it was pleasing that the relationship bound by a common history continues to grow as evidenced by the recent signing of a memorandum ofunderstanding in the field of tourism.
Dumbutchena pointed out that although Zimbabwe is facing a lot of challenges, it has made tremendous progress on its socio-economic front as her economy grew by 3.1% in 2014 which she attributed it to better performance in mining, agriculture and construction.
She said that close to 3 million Zimbabweans of Malawian origin and Malawians living in Zimbabwe live in the country as their own original home, adding that her country’s new Constitution recognizes Chichewa as one of the national languages.
“We are proud as Zimbabweans that we have clocked 35 years since independence although through struggle and tribulations but we have sailed through, we could have not do it in isolation without partners in development which includes Malawi, “said Dumbutchena.
Speaking at the event, Minister of Natural Resources, Energy and Mining who was the guest of honour, observed that Malawi has every reason to celebrate with Zimbabweans as the two nations share common grounds and have unlimited opportunities working together.
“Malawians have a home in Zimbabwe and Zimbabweans have a home in Malawi, we find comfort in each other as we have a lot of things in common, we have every reason to celebrate with our brothers and sisters, Msaka said.
The relationship between Malawi and Zimbabwe dates back to the colonial era when the two countries were under the Federation of Rhodesia and Nyasaland along with Zambia.
The celebrations were under the theme “consolidating unity, peace and economic sovereignty”.
Live music performances by Waliko Makhala, Rudo Mkukupa Chakwera and a legendary traditional singer in Zimbabwe known as Ambuya spiced up the event.